Home Safety and Emergency Preparation - MCTA MandalayMCTA Mandalay
At MCTA, we care for your children about 1/3 of each day. The rest of the time, the children are usually in or near the home. We will be up-dating emergency plans for the school, and we would like to help parents and guardians prepare for disasters which could hit Mandalay.
Hazard awareness and elimination (blocked exits, poisons, flammable material etc.)
Safety response for different situations, eg, earthquake, fire.
Emergency numbers (Provided, see below.)
Venue : MCTA, New Building – Room N202
Time: Start 09:00, about 60-90 minutes
Please register at Information Services Department (Room-113) in person or by phone at 02-72228, 73329.
Mr. Mark Richard Van Dusen
လေးစားရပါသော မိဘများနှင့် အုပ်ထိန်းသူများခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှ အိုးအိမ်လုံခြုံရေးနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို အဆောက်အဦးသစ် အခန်းနံပါတ်-၂၀၂၊ သြဂုတ်လ ၁၂ရက် စနေနေ့၊ မနက် ၉ နာရီတွင် ဆွေးနွေးဟောပြောမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားကလေးများအား နေ့တစ်နေ့ချင်းစီတွင် တစ်ရက်တာ၏ ၃ပုံ ၁ပုံခန့် စောင့်ရှောက်ရပါသည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်များမှာ ကလေးငယ်များသည် မိမိတို့၏ အိမ် သို့မဟုတ် အိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်ကုန်ဆုံးကြပါသည်။ ကျောင်း၏ အရေးအပေါ်အခြေအနေအတွက် ပြင်ဆင်ထားမှုများကို တင်ပြပြီး၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူများအတွက်လည်း မန္တလေးမြို့တွင် သဘာဝ ဘေးအန္တအရာယ်ကျရောက်လာပါက ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများ ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဘေးအန္တရာယ် သတိပြုဖွယ်နှင့် လျှော့ချခြင်း (ထွက်ပေါက်များ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အဆိပ်သင့်ဖွယ်ရာများ၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော အရာများ)
၂။ အ‌ခြေအနေ အမျိုးမျိုးတွင် လုံခြုံမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ဥပမာ-မြေငလျှင်၊ မီးဘေးအန္တရာယ်)
၃။ အိုးအိမ်များတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်း
၄။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အသုံးပြုရန် ပစ္စည်းများ
၅။ အရေးပေါ်အ‌ခြေအနေအတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။)
တက်ရောက်ရန် စိတ်ပါ၀င်စားသော မိဘများအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလတ်ဌာန အခန်းနံပါတ်-၁၁၃၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၂-၇၃၃၂၈၊ ၀၂-၇၃၃၂၉ သို့ ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။